Spurs Oo Laga Reebay Europa League-ga Xilli Tababaraha Cusub Ee Dinamo Uu Taariikh Sameeyay – Garsoore Sports
Spurs Oo Laga…
Kooxda kubbada-cagta ee Dinamo Zagreb ayaa kala dirtay kooxda Tottenham Hotspur islamarkaana ka reebtay Europa League-ga kaddib markii uu seddexleey goolal ah u dhaliyay weeraryahan Mislav Orsic taasoo u sahashay kooxda heysata horyaalnimada Croatia inay wadar ahaan labada lug 3-2 kaga badiyaan kooxda Ingariiska wareegga 16ka ee tartankan.
Dinamo ayaa 3-0 ku badisay kulankan cayaar waqti dheeri ah loo baahday si ay u gaarto wareegga 8 dhammaadka markii ugu horeysay ee tababare Dario Krznar uu leyliyo kooxda isagoo Isniintii xilka kala wareegay Zoran Mamic, oo lagu xukumay 4 sano iyo siddeed billod xabsi ah, eedeeymo la xiriira musuqmaasuq.
2-0 ayay kusoo idlaatay lugtii hore oo uu tababaraha xabsiga wajahaya uu leylinayay, hayeeshee Dinamo ayaa soo lugtan kusoo laabatay garoonkooda iyadoo cayaarta markii ay socotay 62l daqiiqo gool soo celisay, waxana u dhaliyay weeraryahan Orsic.
Orsic ayaa markale shabaqa soo taabtay isagoo barbarreeyay daqiiadii 83aad ee cayaarta.
Intaa kaddib waxay noqotay in ay koox walba ay raadiso tab ay gool ku dhaliso cayaartan ay ka harsantahay 7 daqiiqo.
Weerar iyo weerar celis, isku dayo lasameeyay kaddib siddaas ayuu kusoo idlaatay 90ka daqiiqo waxaana loo baahday 30 dheeri ah.
Daqiiqadii 106-aad ee cayaarta ayuu markale cayaaryahan Orsic shabaqa soo taabtay balse tani waa ay ka duwantahay sidii hore, waa goolka guusha ee cayaarta, gool ayuu dhaliyay kaddib dadaal aad u qurux badan oo uu sameeyay madaama uu garaacay afar daafac oo soo booqday isagoo orod ku jira kahor inta uusan meel hoose ka marin goolhaye Lloris ilaashanaya shabaqiisa.
Spurs oo xaaladu ay ka wareersantahay ayaa weeraro culus ku qaadayay kooxda Dinamo 10-kii daqiiqo ee ugu dambeysay cayaarta.
Goolhayahe Dominik Livakovic ayaa beeniyay iskudayadii waqti dambe ee Gareth Bale iyo Harry Kane, siddaas ayayna ugu dambeen kusoo idlaatay cayaarta.
Kooxda Dinamo Zagreb ayaana usoo baxday wareegga 8 dhammaadka EL-ga iyadoo tababare José Mourinho iyo kooxdiisa ay isaga huleeleen garoonka si ay isagu diyaariyaan safarkooda dib u laabasho ee London iyagoo niyadjabsan.